Ny distrikan'i Saint Denis mahagaga ao Paris | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Frantsa, Paris
Paris dia iray amin'ireo renivohitra mpizahatany lehibe eran'izao tontolo izao ary mila dia mihoatra ny indray mandeha ny fahitana azy.
Manana zorony maro, tranombakoka maro, trano fisakafoanana maro ary toerana mahaliana hitsidika azy amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Ny iray amin'ireo tanàna manodidina azy dia Sain-Denis, eo ambanin'ny kilometatra iray monja miala ny afovoan-drenivohitra frantsay.
2 Ahoana ny fomba hahatongavana any Saint-Denis
3 Inona no ho hita any Saint-Denis
4 Fiainana amin'ny alina any Saint-Denis
Saint-Denis dia ambanivohitra any avaratr'i Paris malaza eo amin'ireo mpizahatany manana ny Basilika any Saint Denis izay ipetrahan'ny mpanjaka frantsay maromaro ary satria eo koa no misy ilay Stade de France malaza, kianja filalaovam-baolina sy rugby.
St Denis manana fiaviana romana Gallic, Saingy rehefa nanipy ny maritiora voalohany ny fiparitahan'ny Kristianisma tany amin'ireny tany ireny dia nifandimby ny tantarany rehefa nalevina teto ny evekan'i Paris voalohany, Saint Denis, taorian'ny naha-martiora azy tao Montmartre.
Ny Abbey medieval manana anarana mitovy dia vita tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary tranobe goavambe goavambe Gothic izy io ary, taorian'ny nananganana azy, dia nalevina ny taolam-paty na masin'ilay mpiaro an'i Frantsa, Saint-Denis.
Ary raha miresaka ny tantaran'ny fivavahana isika ady lehibe teo amin'ny Katolika sy ny Protestanta no nitranga tany amin'ireo tany ireo tamin'ny 1567, iray izay nandresy voalohany ary niafara tamin'ny fivadihan'ny Fivavahana Katolika an'ny Mpanjaka Henry IV.
taty aoriana ny nekropolis an'ny abbey dia lasa toeram-pitsaharana mandrakizay an'ny mpanjaka galisiana ary ny farany nandevenana ny mpanjaka dia Louis XVIII tamin'ny 1824. Noho ny fanjavonan'ny mpanjaka dia very voninahitra ity faritra Paris ity fa nanomboka namboarina an-tanàn-dehibe sy natao indostrialy ary nihatsara.
Ny mponiny dia nanomboka tamin'ny tantsaha ka hatrany amin'ny mpiasa ka tamin'ny fiandohan'ny tolona sosialista dia lasa ivon-toerana politika manan-danja i Saint-Denis ary Ny sosialisma dia nahazo ny fandresena voalohany politika teto izay nanjary nahafantarana azy hoe la Ville mena na Red Villa.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Saint-Denis
Saint-Denis dia antsasak'adiny avy eo afovoan'i Paris ary ny fitaovam-pitaterana manompo azy ireo dia ny tram, metro, RER ary Transsillien. Misy ny gara Saint-Denis nanomboka tamin'ny tapaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ary avy eo ny fitaovam-pitaterana nolazaiko dia manana gara maromaro ao amin'ny manodidina anao.
Raha mandray ny Metro line 13 manana ny gara Université ianao, ny gara Carrefour, ny gara Porte de Paris izay akaiky indrindra ny Stade de France sy ny gara Saint-Denis Basilica, ohatra.
Inona no ho hita any Saint-Denis
Saint-Denis no zavatra kolontsaina betsaka indrindra ho hitanao any Paris. Mipetraha eto Afrikana, kiorda, pakistaniana, alzeriana, sinoa, tiorka, indianina ary maro hafa. Ny sasany amin'izy ireo dia tsy manana antontan-taratasy na fahazoan-dàlana hiditra ao amin'ny firenena fa izy ireo dia monina sy miasa any Frantsa. Ary betsaka, maro no teraka atolotry ny ray aman-dreny vahiny.
Raha manontany ireo masoivohon'ny fizahan-tany ianao, dia toerana misy izany tsy maintsy mitandrina satria miely ny zava-mahadomelina sy ny asan-jiolahy. Raha mbola te-hahita azy ianao dia mandray fitateram-bahoaka ary mandany tolakandro mandehandeha.
St Denis fitaratra an'i Paris ankehitriny io, mpandova ny fanjanahan-tany frantsay taloha, fa ho an'ireo fiverenan-damaody taloha ireo ny ampahany dia lasa toerana haleha hipsters y olona antonontonony amny'ny mpia Parisianina maniry fatratra exoticism.
Saint-Denis dia antsasak'adiny amin'ny lamasinina avy eo afovoan'i Paris ary ankehitriny ho an'ny maro dia io no toerana mampidi-doza indrindra eto an-drenivohitra frantsay. Ny kolontsaina marolafy, izay ananan'ny Silamo betsaka, no mason'ny tafio-drivotra ary maro no matahotra fa io no toeram-piterahan'ny mpampihorohoro amin'ny ho avy.
Ny arabe ao ambanivohitra dia alamina manodidina ny làlambe iray antsoina hoe Rue du Farbourg St Denis aiza ny fivarotana sy trano fisakafoanana ahafahanao mankafy lovia karana, pakistana na afrika. Betsaka koa ireo mpivarotra amoron-dalana, miantsoantso, manome tabataba.
Làlana iray atolotra anao hafa handehanana ny eny an-dalana Montorguielamin'ny trano fisakafoanana sy kafe bohemian, miaraka amin'ireo olona mamaky Le Monde fa miaraka amin'ny olona avy amin'ny fiaviana ara-pirazanana rehetra. Ary na tsy i Paris raha tsy misy tapakila, mazava ho azy.
Ilay andalan-teny Petite Ecities, eny amin'ny habakabaka ary voahitsaka hazo, izay fisokafan'ny trano fisakafoanana, fisotroana ary fisotroana kafe foana fa isaky ny talata amin'ny 7 ora hariva no fihaonana amin'ireo tantsaha biolojika mivarotra ny vokariny.
El andalan-teny Brady Làlana manintona sy mitafo fitaratra izy io, namboarina tamin'ny taonjato faha-XNUMX, izay toa an'i India kely. Andininy iray hafa dia el andalan-teny Prado, miendrika litera L, misy valindrihana fitaratra sy rindrina kanto-nouveau.
Ny vavahady Saint Denis dia andohalambo mandresy naorin'i Carlos V ary noravan'i Luis XIV izay nidiran'ny mpanjaka izay nosatrohana satroboninahitra tao amin'ny Basilica tao Saint-Denis tao Paris. Tamin'ny faran'ny taona 80 dia namboarina tamin'ny sanganasa izay naharitra folo taona izy io: 25 metatra ny haavony, dimy metatra ny sakany ary vonjy maika.
Mazava ho azy fa ny Basilica Saint-Denis manintona lehibe izany. Ny Abbey medieval dia manan-danja lehibe amin'ny tantara sy ny maritrano. Saika rava tanteraka tao amin'ny Revolisiona frantsay satria nisolo tena ny mpanjaka izy io ary ny fiangonana irery no tavela satria ny zavatra hafa rehetra, simba ny sary sokitra, ny abbey, ny fasana.
Na dia io aza no tena firenena ankehitriny misy fasana mpanjaka sisa tavela amin'ny maro izay fantany ny hananany satria rehefa mandeha ny fotoana sy ny korontana ara-politika dia nosokafana, nopotehina na very na nafindra tamin'ny fasana tena izy ny fasan'i Bourbons, Valois, Plantagenet nefa tsy nisy rima na antony firy.
Nanokatra ny fiangonana indray i Bonaparte ary tsy nikasika ireo fasana marobe. Tamin'ny 1817 dia nandidy ny hanokatra azy ireo ny Bourbons, na dia kely aza ny zavatra hitany. Ny sisa tavela tamin'ny vatan'ny mpanjaka sy mpanjaka 158 dia napetraka tao amin'ny tranombakoka iray tao an-tampon'ny fiangonana niaraka tamin'ny takelaka marbra mitondra ny anarany.
Raha mitsidika ny fiangonana ianao dia hahita izany rehetra izany ary koa crypt manokana an'ny Bourbons izay nandevenana ny razana Louis XVI sy ny vadiny Marie Antoinette avy any Austria Tamin'ny 1815 ihany.Hitanao ihany koa ny fasan'ny mpanjaka, mpanjakavavy ary manan-kaja hafa, ny sasany dia nalaina avy amin'ny abbey sy fiangonana hafa.
Izy io dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX avy amin'ilay mpanao mari-trano ihany izay namerina tamin'ny laoniny ny Katedraly Notre Dame.
Fiainana amin'ny alina any Saint-Denis
Raha tsy tianao ny tsy fandriam-pahaleman'ny tanàna lehibe dia tsy tsara ny mitsidika an'i Saint-Denis amin'ny alina., raha tsy mivezivezy amin'ny vondrona iray ianao dia miteny frantsay tsara na manana namana eto. Raha izany dia tsara ny fiaraha-monina mandritra ny alina.
Tianao ilay Nightlife hispter? Ka eto ny mekahanao amin'ny Jeannette, tranokala efa dimampolo taona farafahakeliny nefa malaza amin'ny tanora ankehitriny. Mihinana sakafo frantsay ianao, misy fitaratra taonjato faha-XNUMX sy latabatra Retro Formica.
Mifanohitra amin'izany ny Mauri 7, bara iray misy rindrina anatiny voaravaka rakotra firaketana LP sy latabatra sasany miorina amin'ny Passage Brady. Is koa Sully ary ny Château of Au, saingy mihabetsaka ny bara sy kafe mipoitra toy ny holatra taorian'ny orana sy hamandoana iray andro.
Araka ny hitanao, Saint-Denis dia toeran-karena manankarena sy mahaliana any Paris. Zavatra iray zarain'ny renivohitra frantsay miha-mitombo amin'ireo renivohitra eropeana hafa izay mampiavaka azy, kolontsaina marolafy, fa raha tianao ny harena ara-kolontsaina dia mampanan-karena anao sy mampianatra anao izany, dia diabe tsy tokony ho diso ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Frantsa » Ny distrikan'i Saint Denis mahagaga ao Paris
Salama ary misaotra betsaka amin'ny vaovao,
Heveriko fa mampifangaro faritra roa samy hafa ianao ao amin'ilay lahatsoratra iray ihany, samy an'ny faritra Île de France.
Ny voalohany amin'izy ireo dia ny tanànan'i Saint Denis (izay ivelan'ny Boulevard Périphérique ary avy eo ivelan'ny toerana heverina ho afovoan'i Paris, izay misy distrika 20 ao aminy). Eto no ahitàna ny katedraly ary mora idirana noho ny làlan'ny metro 13. Araka ny efa voalaza, izy dia iray amin'ireo faritra be kolontsaina indrindra noho ny fifindra-monina.
Etsy ankilany, manana ny faritra manodidina ny gara metro antsoina hoe Strasbourg-Saint Denis isika (andalana 8, 4 ary 9), izay ahitantsika ny andohalambo amin'ny sary ary koa ny trano fisakafoanana karana Passage Brady. Saingy eo afovoan'i Paris ity faritra ity ary eo anelanelan'ny distrika 2 sy 10, akaikin'i République.
Mamaly an'i Älvaro
Zavatra 7 tsy nisy olona nilaza taminao momba ny Camino de Santiago